အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ. အသက်အရှည်ဆုံး heroin သုံးစွဲသူကို ဖမ်းမိ | Buzzy
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ. အသက်အရှည်ဆုံး heroin သုံးစွဲသူကို ဖမ်းမိ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ အသက် ၈၀ ခန့် ရှိတဲ့ အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကို heroin တွေနှင့်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ရဲတွေက ဘိန်းဖြူတွေကိုတောင်ဝှေးထဲ ထည့် ပြီး သုံးစွဲနေတဲ့ အသက် ၈၀ ကျော် အဖိုးကြီး Francis Cook ကို ဘိန်းဖြူတွေနှင့်အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကားရပ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ရုတ်တရက် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဖိုးကြီး ရဲ. တောင်ဝှေးထဲမှာ ဘိန်းဖြူတွေကို တွေ့ ရှိခဲ့ရပြီး အဖိုးကြီးကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ ပါတယ်။ယခုတွေ့ရှိချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Cook ကို ဘိန်းဖြူဖြန့်ဖြူးနေသူဟု ယူဆနေကြပါတယ်။
အင်ျဂလနျနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ ရဲတှကေ ဘိနျးဖွူတှကေိုတောငျဝှေးထဲ ထညျ့ ပွီး သုံးစှဲနတေဲ့ အသကျ ၈၀ ကြျော အဖိုးကွီး Francis Cook ကို ဘိနျးဖွူတှနှေငျ့အတူဖမျးဆီးရမိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအဖိုးကွီးကားရပျထားတဲ့ အခြိနျမှာ ရုတျတရကျ ဖမျးဆီးစဈဆေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဖိုးကွီး ရဲ. တောငျဝှေးထဲမှာ ဘိနျးဖွူတှကေို တှေ့ ရှိခဲ့ရပွီး အဖိုးကွီးကိုလညျးဖမျးဆီးခဲ့ ပါတယျ။ယခုတှရှေိ့ခကျြနဲ့ ပတျသကျပွီး Cook ကို ဘိနျးဖွူဖွနျ့ဖွူးနသေူဟု ယူဆနကွေပါတယျ။
ရဲတွေကတော့ ဘိန်းဖြူသယ်ယူတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို Plymouth မှာ ရှာဖွေ နေကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စက အလွန်ကို ထင်ရှားတဲ့ အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်မှာ အသက်အရှည်ဆုံး ဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူလို့လည်း ပြောနေကြပါတယ်။ Francis Cook ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ပေါင် ၇၀၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ ဆေးခြောက်ပင် ၁၈၂ ပင် စိုက်ပျိုးမှု အတွက် ထောင် ၂ နှစ်ခွဲခန့် ကျခံခဲ့ ဖူးသူဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ရဲတှကေတော့ ဘိနျးဖွူသယျယူတဲ့ လမျးကွောငျးတှကေို ဆကျတိုကျဆိုသလို Plymouth မှာ ရှာဖှေ နကွေပါတယျ။ ဒီကိစ်စက အလှနျကို ထငျရှားတဲ့ အကွောငျးအရငျးဖွဈပွီး အင်ျဂလနျမှာ အသကျအရှညျဆုံး ဘိနျးဖွူသုံးစှဲသူလို့လညျး ပွောနကွေပါတယျ။ Francis Cook ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှဈတုနျးကလညျး ပေါငျ ၇၀၀၀၀ တနျဖိုးရှိ ဆေးခွောကျပငျ ၁၈၂ ပငျ စိုကျပြိုးမှု အတှကျ ထောငျ ၂ နှဈခှဲခနျ့ ကခြံခဲ့ ဖူးသူဖွဈတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။